HIM | Health in Myanmar » 2014 » May
The World Bank is investing in Myanmar. There isaLOT of reform needed in this institution. Thanks toareader for the following: Jamie ++++++++++++++++++ The World Bank invests about one-quarter of its budget for country services in knowledge products. However more than 31 percent of World Bank policy reports are never downloaded. Almost […]
WHO as the institution of last resort
Don’t you find it amusing that WHO staff will be soon be able to help countries with Global Fund activities only as the institution of last resort? Ten years ago WHO Myanmar provided technical assistance without asking the Global Fund. If regular staff will help, why does WHO need $29 million from the Global Fund […]
Ending the End of AIDS asaphrase
It is about time someone withahigh profile media presence challenged the facile phrase “The End of AIDS” or “AIDS Free Generation”. Too bad Dybul didn’t challenge it when he was deep inside the institutions spouting them. But he has nailed it here. Can the Global Fund respond? Or will it be business as […]
Want official data on the HIV epidemics in Asia and the responses to them? AIDS Data Hub has all the Excel files in downloadable form … http://www.aidsdatahub.org/Data-Sheets Jamie
Author: HimBur | Category: Myanmar, Q&A, ဆောင်းပါးno comments | Tags: HIV, ပညာပေး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
စမ်းသပ်မှု လုပ်နိုင်တယ်။ သတိထားဘို့က HIV tests positive အပေါင်းဖြစ်သူတိုင်းကို စမ်းသပ်ရင် လူအများစုမှာ Cytomegalovirus (CMV) အပေါင်းပြနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရောဂါရတဲ့အဆင့်အထိ မရောက်တာက များတယ်။ စိုးရမ်စရာ မလိုတတ်ပါ။ CD4 cell count စစ်လို့ 50 ထက်နည်းသူတွေမှာသာ ဒီရောဂါရတယ်။ ဒီလို သွေးစစ်တဲ့အခါ Antigens (အင်တီဂျင်) တွေ့ရင် ပိုးအဝင်ခံထားရတယ်။ Antibodies (အင်တီဘော်ဒီ) တွေ့ရင် ရောဂါအဆင့် ရောက်နေ တယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။
Something from 3MDG Fund
Can anyone find the ‘statement’ that is the source of this article on line? Jamie ++++++++++++++++++ Burma Gets $91M to Tackle HIV, TB and Malaria Ksaw Hsu Mon The Irrawaddy Thursday, May 22, 2014 | RANGOON — The Three Millennium Development Goal Fund (3MDG) has committed US$91 million to help Burma deal with HIV, tuberculosis […]
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: HIV, ပညာပေး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
DNA test နည်းကို NAAT = Nucleic acid amplification testing လို့ခေါ်တယ်။ ပိုးကိုလိုက်စမ်းတဲ့နည်း ဖြစ်တယ်။ အင်တီဘော်ဒီ နည်းထက် စောသိမယ်။ ART ဆေးပေးနေသူတွေကို စောင်ကြည့်ရာမှလုပ်ရတဲ့ Viral load test နည်းနဲ့ ဆင်တယ်။
HIV and CD4 စီ-ဒီ-ဖိုး (အမေးအဖြေ)
Author: HimBur | Category: Myanmar, Q&A1 comment | Tags: AIDS, CD4, HIV, ပညာပေး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
HIV ရောဂါ ရလာရင် CD4 အရေအတွက် ကျဆင်းတယ်။ ART ဆေးပေးပြီးနောက် နလံထမှာ တခါ ပြန်တက်လာတယ်။ CD4 နဲ့ VL ဆက်စပ်နေတာ ရှိသလို တခါတလေ အဲလို မဟုတ်တာလဲ တွေ့နေရတယ်။ ၁ဝ% လောက်မှာ VL ကျနေပေမဲ့ CD4 မတက်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် CD4 တုံ့ပြန်မှု မရှိတာနဲ့ ဆေးကုတာ မထိရောက်ဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါ။ Viral load (VL) ဟာလဲ CD4 လောက်တော့ မတိကျပါ။
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmarno comments | Tags: နည်းလမ်း, ပညာပေး, အမျိုးသမီး
အမျိုးသမီးတွေဟာ ဓမ္မတာရက် အတွင်းမှာ စိတ်အလိုမကျဖြစ်တာမျိုးတွေ၊ အကြောင်းမရှိ ၀မ်းနည်းတတ်တာမျိုးတွေ၊ အလုပ်မှာ အဆင်မပြေတာ မျိုးတွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ တစ်လမှာတစ်ခါ စိတ်ချုပ်တည်းမှုတွေ၊ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေ ကြုံတွေ့ရမြဲဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရာသီလာချိန် ခံစားရဲ့ ဖီလင်နဲ့ အတွေးတွေကတော့ တူညီနေတတ်ပါတယ်။
Author: HimBur | Category: Myanmar, Q&Ano comments | Tags: HIV, ပညာပေး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
HIV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ တခြားဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့ မတူတဲ့ အချက်တခုကတော့ ကိုယ်အပြင်မှာ ကြာကြာမနေနိုင်ဘူး။ ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ စမ်းဘို့ ထားချင်ရင်လဲ လူ့အပူချိန်အတိုင်း၊ ၉၈.၆ ဒီဂရီမှာသာ ထားရတယ်။ အဲလို လုပ်ပေးမထားရင် မိနစ်နည်းနည်းသာ ရှင်မယ်။ လူ့ကိုယ်ထဲက ထွက်ရင် နာရီပိုင်းသရှင်တယ်။ တချို့ပိုးတွေလို အကာအဖုံး (စပိုး) လိုလဲ မလုပ်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် နှုပ်ခမ်းခြင်း စုပ်နမ်းတာတို့ ပွေ့ဖက်မှု လုပ်တာနဲ့ ပိုးမကူးနိုင်ပါ။
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: HIV, ကုသမှု, ဆေးဝါး
သြစတေးလျနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ကမ်းရိုးတန်းလွန်ဒေသမှာ တွေ့ရှိရတဲ့ cnidarins မှာ အဲဒီလို အာနိသင်ရှိကြောင်းကို သြစတေးလျနိုင်ငံ၊ အမျိုး သားကင်ဆာနဲ့ ဗိုင်းရပ်ပိုးဆိုင်ရာ အင်စတီကျုက သူ့မှာပါဝင်တဲ့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ သဘာဝ ပစ္စည်းတွေကို စစ်ဆေး သုံးသပ်ပြီးမှ ယခုလို ကြေညာနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပရိုတင်းက HIV ပိုး ကူးစက်ခြင်းနဲ့ ခုခံအားစနစ်ကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ် နိုင်မှုတွေကြောင့် ကာကွယ်ဆေးများမှာလည်း အသုံးပြုနိုင်ချေ ရှိမရှိကို ဆက်လက် လေ့လာနေကြပါတယ်။